My freedom: Art Museum++
ဟိုနေ့က အမှတ်မထင် Singapore Art Museum ရောက်သွားတယ်။ ပန်နီဆူလာကနေ လမ်းလျှောက်သွားလို့ ရတယ်။ ၀င်ကြေးက S$10... ၁၀ ပေးရင် အဆောက်အအုံ နှစ်ခုကို ၀င်လို့ရတယ်။ ပထမအဆောက်အအုံ (Ticket ရောင်းတဲ့နေရာ)ထက် ဒုတိယအဆောက်အအုံက ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ သူက ကလေးဆန်ဆန်လေးတွေ လုပ်ထားတာ။ ကန်ဒီတို့ ပထမအဆောက်အအုံမှာ ကြာနေတာနဲ့ ဒုတိယအဆောက်အအုံအတွက် အချိန်နည်းနည်းပဲရလိုက်တယ်။ ပြတိုက်က ည ၇နာရီဆို ပိတ်တာလေ။
ဓာတ်ပုံတွေပဲ အဓိကပြမယ်နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှင်းပြရအောင် ကန်ဒီကိုယ်တိုင်လည်း တော်တော်များများကို နားမလည်လို့ ဟိဟိ :P
အဲ့ဒါက နနွင်းမှုန့်တွေကို စက္ကူလှေလေးတွေထဲ ထည့်ထားတာ..
Performance လုပ်ပြတဲ့ လူကြီးရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကပ်ထားတာ...
ဒါက ဂိမ်းကစားတာ ထင်တယ်။ Chess လိုမျိုးလေ။ ဘေးမှာ စာနဲ့တော့ ရှင်းပြထားတယ်။
ကန်ဒီလည်း ဖတ်တာပဲ။ ခက်တာက နားမလည်ဘူး >.<
ခုနက ပုံရဲ့ဘေးမှာ ဒီလိုဖိနပ်တွေ တန်းစီထားတယ်။ ဘာလုပ်တာပါလိမ့် @_@
ဒါလည်း Art တမျိုးပေါ့နော် :D
အော်... ဒါက ဒီလိုကိုး (တကယ်တော့ ဘာမှန်းကို မသိတာ။ အပေါ်က အ၀ါလေးက ကြက်ရုပ်လေး)
ခဲပန်းချီ.. ဒါတော့ သိတယ်ကွ :D :D
ဒုတိယအဆောက်အအုံ ရောက်သွားပြီ။ အဲ့မှာ ဘာမှသိပ်မရိုက်လိုက်ရဘူး။ အချိန်နည်းနည်းပဲ ရလို့။
တကယ်လို့များ နောက်တခါ အဲ့ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီအခန်းမှာပဲ ဆေးရောင်ခြယ်နေမယ် ဟိဟိ :D
ကင်မရာတလုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်တွေ့ခဲ့ရင် ကန်ဒီလို့သာ မှတ်လိုက်တော့ :P
သူတို့ပုံဆွဲနေတုန်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရိုက်သည် :)
ကန်ဒီသီချင်းမဆိုတာ ကြာပြီနော်။ အသံသေး အသံကြောင်လေးကို မလွမ်းဘူးလား :P .. လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် နားထောင်ဖို့ ဒီမှာ... ရှင်ဖုန်းရဲ့ "ခုံတန်းလေး" သီချင်းဆိုထားပါတယ် :D
မနက်ဖြန် ကမ်းခြေသွားမယ်။ လူတွေအများကြီးပဲ။ ဂိမ်းတွေလည်း ဆော့ကြမယ် ပြောတယ်။ အဆင်ပြေရင် အားလုံးအတွက် ဗွီဒီယိုရိုက်ခဲ့မယ်နော် Mwah :D
အဲ့ဒီ ပြခန်းကို မဒမ်ကိုးဆီမှာလဲ ကြည့်ခဲ့တယ် .ဒီမှာလဲ ထပ်ကြည့်တယ်..
BUT ဘာမှနားမလည်တာခက်တယ် ဟိ
မဒိုးကန်ပေးထားတဲ့..ဗွက်တော် အရှည်ကြီးနဲ့ ဟိုတုန်းက မော်ဒယ်အာပေတူး))))း
မနေ့က ကြည့်ခဲ့ပါပြီကော အကိုတို့လည်း ညေးတို့လိုဘဲ ဘာမှ နားလည်ဘူး..။
တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ.. သေချာပါတယ်နော..
ကိုလဲ ကြိုက်တယ် candy လေးကိုချစ်တယ်
ပါဖောမန့် ကလည်း .. ပဲများများနဲ့ မင်းသမီးပုံပဲ များနေတယ်နော်.. ဟီး ... ;p...
ကင်မရာတလုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်တွေ့ခဲ့ရင် ကန်ဒီလို့သာ မှတ်လိုက်တော့ (မှတ်ချက် CANDY ရူးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်..)သူငယ်ချင်းရေ CANDY ရှင်ဖုန်း ကြားရင် ငိုသွားမယ်နော်...
နှုတ်ခမ်းကြီးစူလိုက် ထော်လိုက် ... ဒါပဲလုပ်တက်တယ်
ကန်ဒီရေ art museum က ပုံလေးတွေနဲ့ တကွ တင်ပေးထားလို့ကိုယ်တိုင်ေ၇ာက်သလို ခံစားမိပါတယ်
ဝက်သက်ဝက်သက် ဟဟ :P
အားလုံးက သိပြီးသား ဆိုတော့ သီချင်းဘဲ နားထောင်သွားတော့တယ်...
ကျန်တာဘာမှမသိဘူး နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ Mwah ဆိုတဲ့အသံနဲနဲကျယ်သွားသလားလို့ :P
Art Museum အကြောင်း ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ လေ့လာသွားတယ် ချိုချဉ်လေးရေ။ သီချင်းလေးလည်း နားထောင်သွားတယ်။
သီချင်းလေးနားထောင်သွားပါတယ်ဗျာ မမ လေး
ဖိနပ်နဲ့ ပါးစပ်နဲ့က ကပ်ရက်သားဆိုတော့..
ပိစိလေး ဗိုက်ဆာပြီး တွေ့ကရာများ ဆွဲစားဖို့ ကြံစည်နေလေရော့သလားဆိုပြီး စိုးရိမ်မိလိုက်သေးတယ်။း)
ဒီလိုနေရာတွေ..ကျွန်တော်သိပ်ကိုသွားချင်တယ်...ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကနေ.အဲဒီကိုသွားရင်..လမ်းစရိတ်တင်ပဲ..6 သိန်းလောက်ကုန်မယ်..ဒါတောင်ဟိုမှာစားမှာ၊ တည်းမှာမပါသေးဘူးနော်.....ခုလိုမြင်တွေ့ခွင့်ရတော့....ကန်ဒီကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်